आकाश सफा पार्न आँधी आउनुपर्ने रहेछ! - Blogs of Sagar Prasai
आकाश सफा पार्न आँधी आउनुपर्ने रहेछ!
म भक्तपुरको सानोठिमीमा बसेर कक्षा ११ र १२ पढेको थिएँ। त्यो बेलामा म कलेज नजिकै कोठा लिएर बस्थे। म बसेकै घरमा मसँगै पढ्ने अर्का साथी पनि अर्को कोठा लिएर बस्थे। खाना खान चाहि हामी दुवै नजिकैको एउटा सरकारी क्यान्टिममा जान्थ्यौँ। यसरी सबै काम सँगै गर्ने भएकाले हामी खुब मिल्थ्यौँ।
तर उसका केहि कुरा मलाई चित्त बुझ्दैनथ्यो। मेरो पनि केहि कुराहरू उसलाई चित्त बुझ्दैन रहेछ। तर हामी दुवै एक अर्कालाई केहि भन्दैन थियौँ। तर समय बित्दै जाँदा- एक अर्काको चित्त नबुझ्ने कुराहरूको ठुलै चाङ्ग लागेछ, हाम्रो थोरै भनाभन हुन थाल्यो।
यस्तै मा एकदिन एउटा सानो कुरामा मेरो साथी र मेरो एकदमै ठुलो झगडा भयो। जिन्दगी भरी नबोल्ने कसम खाईयो। यहाँ सम्म कि उसले मलाई हात हाल्न नसकेर मेरो व्हिलचियरलाई एक लात्ति हानेर गयो। त्यो दिन वरीपरीका सबैले सोचे- अब यिनीहरूको सम्बन्ध सकियो। हामीले पनि त्यहि सोच्यौँ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान, म चिया पिउनलाई क्यान्टिनमा जान लागेको थिएँ। सधै उसले नै मलाई व्हिलचियरमा ठेलेर क्यान्टिन लाने गर्थ्यो। त्यो दिन चाहि म आफै बिस्तारै व्हिलचियर गुडाउँदै थिए। पछाडी बाट उ आएर, व्हिलचियर समायो र धकेल्न थाल्यो। अलि अगाडी पुगिन्जेल दुवैजना बोलेनौँ।
क्यान्टिन पुग्न लाग्दा उसले भन्यो- जुलोजीको प्राक्टिल सक्यौँ? मलाई चित्र बनाउन फिटिक्कै आउँदैन थियो। सधै जुलोजीको प्राक्टिकलको बेला चाहिने जिवका चित्र उहि बनाईदिन्थ्यो। मैले भने-"लेखेर सके। फिगर त आए पो बनाउनु।" उसले भन्यो-"म भनेर टिफिनमा बनाईदिन्छु।" अनि हामी अरू कुरा गर्न थाल्यौँ। हामी दुवैले "सरी" भन्नु परेन, मनले आफै बुझ्यो।
आउने दिनहरूमा हामी झन् मिल्ने भयौँ। पछि कलेज सकिएपछि पनि हामी मिल्ने साथी भईरह्यौँ। र आज सम्म पनि हामी नजिक नै छौँ।
म जहिले यो घटनालाई सम्झन्छु मलाई अमेरीकामा बुढापाकाले भन्ने एउटा भनाई याद आउँछ- "कहिले काँही, आकाशलाई सफा पार्न ठूलै आँधी आउनुपर्ने रहेछ।"